Tsiny, tody, fanahy, lahatra, vintana… tahaka ny nanekeny ny fisian'ireo no nankatoavany koa ny fisian'ny hasina. Tsy nitambarany tamin'ny firenen-kafa izany fa azy samirery. Saingy na izany aza, toa hadino ny momba azy.
Toa nanjary fahazaran'ny vava sisa no ilazana fa maty hasina izatsy na izaroa. Sanatria aza mety ho anaran-tsy very sisa no ahalalantsika ny fisian'izany hasina izany kanefa dia nankatoavin'ny Malagasy fatratra ka nasandrany avo ny fananana azy.
Raha faritantsika ankapobeny, ny hasina dia hery ao anatin'ny tsirairay manampy azy hanatanteraka ny adidy aman'andraikiny. Azo adika ihany koa manao hoe : ny adidy aman'andraikitra no miteraka ny hasina. Marihina anefa fa tsy ny olombelona ihany no manana ny hasiny fa na ny zavatra ihany koa aza. Ohatra, ny sira manana ny hasiny noho ny adidy efainy amin'ny sakafo ; ny rano manana ny hasiny noho izy manana adidy hamono ny afo, hisasana, sns. Izany hoe, ao anatin'ireo zavatra (sira sy rano) ireo ilay hery ahafahany manatontosa ny asa manandrify azy. Miteraka hasina ho an'ny sira sy ny rano izany.
Mety ho faty io hasina io. Ny fady no mamono azy mivantana. Tsy ilay fady fahenontsika hatramin'izay ka hatramin'izao ihany (fady kisoa, tongolo, sns) no mamono ny hasina fa eo indrindra indrindra ireo fady tazana miharihary fa hamono ilay hery ao anatin'ny olona na zavatra iray. Ohatra, fadin'ny afo ny rano. Raha tondrahana rano ny afo, maty. Maty manaraka izay ihany koa ny hasiny. Ohatra faharoa : fadin'ny fofona manitra ny vinaingitra. Raha vao rarahana vinaingitra ny fofona manitra dia tsy henon'ny orona intsony. Maty ilay fofona, maty manaraka izany koa ny hasin'ilay ranomanitra. Izany hoe, na olombelona na zavatra ka manana sy miantsoroka adidy dia tsy maintsy manana ny hasiny vokatr'ilay hery ao anatiny manampy azy hanatanteraka izany.
Nankatoavin'ny Malagasy izay fananan'ny tsirairay (zavamanan'aina na tsia) hasina izay hany ka nipetraka sy nohajain'ny fiarahamonina fatratra ny fisiany. Fifampifehezana izay nitarika hatrany amin'ny fifanajana.
Taratra du 19-03-09